Mijanona any Sri Lanka " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka
Raha fintinina momba an'i Sri Lanka (Ceylon)
Azo jerena ao amin'ny rohy ireo antsipirihany momba ny zava-drehetra momba an'i Sri Lanka:
Jeografia sri lanka
Sri Lanka dia fanjakana any amin'ny faritra atsimon'i Azia, izay ny faritaniny dia saika manodidina azy. Sri Lanka. Ny velarantanin'ilay firenena, ao anatin'izany ny velaran-dranomasina, dia 65 sq. km. Ny halavany dia 610 km avy any avaratra ka hatrany atsimo ary 445 km avy any andrefana ka hatrany atsinanana. Ny halavan'ny morontsiraka dia 225 km.
Nosasanin'ny Ranomasimbe Indianina i Sri Lanka, anisan'izany ny Bay of Bengal, izay ampahan'ity ranomasina ity. Raha ny habeny, io nosy io dia mitaha amin'ny Tasmania sy Irlandy. Sri Lanka dia tafasaraka amin'ny kaontinanta Indiana an'ny Strait of Polk sy ny Hoalan'i Manara. Ny elanelana kely indrindra mankany amin'ny tanibe dia 50 km.
Saika ny morontsiraka iray manontolo dia morontsiraka fasika. Maherin'ny antsasaky ny faritry ny nosy no be lemaka, ny haavony dia eo anelanelan'ny 30-200 m. Ny tetezamita maranitra mankany amin'ny tendrombohitra avy any amin'ny lemaka dia any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy, ary ny faritra avaratra kosa somary malama ny tetezamita.
Ao afovoan'i Sri Lanka dia misy ny Plateau afovoany, izay ny lavany avy any avaratra ka hatrany atsimo dia mahatratra 65 km. Ny toerana avo indrindra amin'ny nosy dia Pidurutalagala (2524 m). Amin'ny toerana faharoa dia Kirigalpotta (hahavony 2395 m). Ny tendrombohitra fahatelo any Sri Lanka dia ny Tendrombohitra Adam (hahavony 2243 m), ny fahefatra dia Namunakula (haavon'ny 2036 m). Eo amin'ny ilany avaratry ny lemaka lehibe dia misy faritra be tendrombohitra izay misy havoana, lohasaha lalina ary tampon'isa hatramin'ny 1800 m. Any andrefan'ny lemaka lehibe sy atsimon'ny tendron'i Adam dia misy faritra be tendrombohitra ihany koa.
Toetr'andro sy toetr'andro Sri Lanka
Sri Lanka dia manana toetrandro monsoon subequatorial. Ny monsoon-northeast dia manomboka amin'ny volana Oktobra ary maharitra hatramin'ny volana martsa, ary manomboka ny volana jona sy mitohy hatramin'ny volana oktobra ny monsoon mianatsimo. Ny orana mivatravatra indrindra dia hita any amin'ny morontsiraka atsimo-andrefana hatramin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra. Mahatratra 2 500 mm ny orana isam-bolana amin'ity vanim-potoana ity. Ny monsoons avy ao amin'ny Bay of Bengal dia mihena 1 mm eo ho eo isam-bolana.
Toetany ao amin'ny havoana any Sri Lanka
Ny faritra mangatsiaka indrindra amin'ny nosy dia ny faritra afovoan'ny faritra be tendrombohitra (ny isotherm isan-taona dia +16), ny mafana indrindra dia ny morontsiraka avaratra atsinanana (ny isotherm isan-taona dia +32), izay indraindray mahatratra +38 ny mari-pana. Ny isotherm isan-taona manerana ny nosy dia manomboka amin'ny +28 ka hatramin'ny 30. Amin'ny ankapobeny ny faritra avaratry Sri Lanka dia mafana kokoa noho ny atsimo.
Ny hamandoana kokoa dia ireo faritra atsimo-andrefana sy lemaka avo. Any Colombo, mihoatra ny 70% ny hamandoana rivotra, mandritra ny fotoanan'ny monsoon, mahatratra 90%. Any Anuradhapur mandritra ny andro, tsy mihoatra ny 60% ny hafanan'ny rivotra ary mahatratra 80% amin'ny alina amin'ny Desambra.
Ireo fizaran-taona any Sri Lanka
Ny fizahan-tany any atsimo andrefan'ny morontsirak'i Sri Lankan no vanim-potoana Oktobra sy Aprily, amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana - ny volana martsa ka hatramin'ny Novambra.
Ny andro ankehitriny any Sri Lanka
Ity ambany ity ny làlan-kizan'ny toetr'andro ao Sri Lanka. Azonao atao ny misafidy teboka ao amin'ny sarintany sy sosona (onja, rivotra, orana, sns). Any am-pototry ny widget ihany ianao dia mahita ny toetr'andro toetr'andro mandritra ny telo andro mialoha.
Mponina ao sri lanka
Ny isam-ponin'i Sri Lanka dia manodidina ny 21 tamin'ny taona 440. Ara-poko, ny ankamaroan'ny mponina (000% eo ho eo) dia Sinhalese. Maherin'ny 2017% no Tamils, izay monina any amin'ny faritra avaratra sy atsinanan'ny nosy ny ankamaroany. Ny foko vitsy an'isa hafa dia ny Sri Lankan Moors, izay mandrafitra ny 75% amin'ny mponina, mpamaky trano (mandrafitra ny 11% ny mponina, dia taranaky ny fanambadiana mifangaro an'ny mponina indizeny ao Sri Lanka miaraka amin'ireo eoropeanina) ary Veddas (tsy misy afa-tsy 9,2 0,3 amin'izy ireo izao; dia taranaka ny mponina srilkanika tranainy indrindra).
Ara-pinoana, maherin'ny 70% ny mponina (Sinhalese indrindra) no bodista (solontenan'ny hetsika Theravada ny ankamaroany), manodidina ny 13% no Hindus (ny ankamaroan'ny Tamil), ny 10% dia Silamo, ny 8% dia Kristiana. Ny ankamaroany (82%) an'ny Kristiana ao an-toerana dia Katolika, ny ambiny dia Protestanta.
Ny tanàna lehibe indrindra ao Sri Lanka:
Colombo (mponina manodidina ny 700) - Ny seranan-tsambo lehibe sy toby ara-toekarena an'ny firenena.
Negombo (mponina 128) dia ivon-jono lehibe, miorina amoron-tsiraka, akaikin'ny iraisam-pirenena Seranam-piaramanidina Bandaranaike.
Dehiwala-Mount Lavinia (mponina manodidina ny 240) no toeram-pitsaboana tranainy indrindra ao amin'ny firenena.
Dehiwala tendrombohitra lavinia
Toekarena ao Sri Lanka
(Vakio bebe kokoa momba ny fifanakalozana fifanakalozana, banky sy ATM any Sri Lanka, vakio eto)
Sri Lanka dia mamokatra saika ny 10% amin'ny tàka eran'izao tontolo izao. (Ny lohahevitra momba ny dite Sri Lankan dia voalaza amin'ny an-tsipiriany HERE) Maherin'ny 305 taonina isan-taona io (araka io tondro io, i Sri Lanka no mitana ny laharana fahatelo eran'izao tontolo izao, ao aorinan'i Sina sy India). Ankoatr'izay, ny famokarana kanelina sy fingotra ary ny fitrandrahana vato sarobidy dia indostria lehibe.
Ny foibe ara-toekarena lehibe sy ny seranan-tsambo lehibe indrindra an'ny firenena dia Colombo.
Entina haondrana dite, voam-boanjo, vodin-dovia, safira, safira, grika.
(Amin'ny an-tsipiriany, ambadika ny lohahevitry ny filozofia sy ny fomba kolontsaina an'i Sri Lanka eto)
Sri Lanka dia malaza noho ny maritrano, sary sokitra sy sary hoso-doko, izay misy ifandraisany amin'ny Buddhism.
Isika maro miparitaka manerana ny firenena, misy koa sary sokitra Buddha be dia be, izay tena malaza indrindra ao Buduruvagal sy Aukan.
Sarivongan'i Buddha ao amin'ny tanànan'i Aukana
Ivon-toeran'ny kolontsaina maoderina lehibe dia ny tanànan'i Kandy.
Tanànan'i Kandy. Sri lanka
Ny ohatra amin'ny maritrano eropeana mpanjanatany dia ny trano mimanda, fiangonana, lakandrano namboarin'ny Holandey, ary koa trano fonenana sy fitantanan-trano namboarin'ny anglisy. Ny maritrano kolonialy dia manjaka ao an-tanànan'i Galle.
Ny dihy nentim-paharazana Sinhalese dia tena akaikin'ny Indiana, na izany aza, manavaka azy ireo amin'ny fampiasana betsaka ny singa akrobatika. Ao Kandy, azonao atao ny mijery dihy nentim-paharazana ho an'ireo faritra be tendrombohitra any Sri Lanka, ary any Ambalangoda sy Colombo - amin'ny "dihy devoly", izay atao mba handroahana ireo fanahy ratsy.
Olo-piainana ao Sri Lanka
Theatre Sri Lanka
Ny teatra ao an-toerana dia manambatra ny dihy miaraka amin'ny teatra sarimihetsika sy fanaovana amponga. Ny fampisehoana teatra dia manana votoaty momba ny angano.
Asa tanana sy asa tanana nentin'i Sri Lanka
Ny asa tanana nentim-paharazana toy ny fanenon, vita amin'ny metaly, seramika ary ny sokitra hazo dia namboarina.
Vakio bebe kokoa momba ny fitateram-bahoaka Sri Lanka eto.
Antsipirihany momba ny fanofana bisikileta ao Sri Lanka
Antsipirihany momba ny fanofana fiara ao Sri Lanka eto
Ny fitaterana ifaneraserana lehibe indrindra any Sri Lanka dia tuk-tuk. Na izany aza, mandritra izany fotoana izany, ny mpamily tuk-tuk dia mitaky farafahakeliny avo roa heny amin'ny saran-dalan'ny mpizahatany noho ny an'ny mponina eo an-toerana. Marihina ihany koa fa ny tuk-tuk dia tsy fomba azo antoka sy tsy dia mety amin'ny fitaterana.
Azonao atao ny manofa fiara ao Sri Lanka amin'ny vidiny $ 30 isan'andro (mandritra ny fotoana ela fanofana), mora kokoa ny andro). Raha tsy nisy ny traikefa an-dàlam-pandrosoana tany amin'ity nosy ity, dia tsara kokoa ny manofa fiara miaraka amin'ny orinasa iraisam-pirenena. Mora ny mampiasa Internet.
Azo atao eto ihany koa ny fanofana bisikileta, na izany aza, amin'ireo orinasa malaza eo amin'ny morontsiraka akaikin'ny morontsiraka ihany no misy ireo orinasa manome ity serivisy ity. Ao amin'ny faritra afovoan'i Sri Lanka dia sarotra be ny mahita fanofana bisikileta.
Ny tena ilaina amin'ny sakafo ao an-toerana dia ny vary sy saosy kari. Ny lovia toy ny thali, biriyani, kul dia malaza. Sakafom-pisakafoanana tsy manam-paharoa Sri Lankey - hoppers, izay toy ny pancakes ary aroso miaraka amin'ny yaourt sy tantely na atody. Ny lovia hazandrano dia fahita any amin'ny faritra amoron-tsiraka, indrindra fa ny lomotra. I Sri Lanka koa dia malaza amin'ny voankazo tropikaly, dite matsiro ary labiera misy kalitao azo ekena.
(amin'ny antsipiriany momba ny nahandro an'i Sri Lanka, ny famaritana ny lovia malaza novakiana eto)
Ny fampiasana karatra SIM an-trano any Sri Lanka dia lafo be, noho izany dia tsara ny mividy karatra SIM amin'ny iray amin'ireo mpikatroka Sri Lankan. Ohatra, ny antso amin'ny telefaona finday ao amin'ny Federasiona Rosiana dia mandany vola 15 rupees Sri Lankanina isa-minitra. Manodidina ny 6 roubles izany. Federasiona Rosiana. Ny dingana ny fividianana sy ny fananganana karatra dia tena tsotra, ny zava-drehetra dia ho atao ao anatin'ny 10 minitra, na dia tsy miteny anglisy aza ianao. Betsaka ireo mpandraharaha finday eto amin'ity firenena ity. Ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia Dialog sy Mobitel, raha ny Dialog kosa dia manana fandrakofana sy fifandraisana tsara kokoa, na dia somary avo kokoa aza ny tahanany.
(Ny fampahalalana momba ny serasera finday sy ny Internet any Sri Lanka, misy fijerena ireo mpandraharaha sy ny vidiny eto)
Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny zava-drehetra momba an'i Sri Lanka dia azo jerena ao amin'ny rohy: